ယနေ့အသင်းတော်များအဖို့ ကနဦးအသင်းတော်တို့၏ ဧဝံဂေလိပုံစံနမူနာ ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာဂျေအာရ်၏ | Real Conversion
ယနေ့အသင်းတော်များအဖို့ ကနဦးအသင်းတော်တို့၏ ဧဝံဂေလိပုံစံနမူနာ
ဒေါက်တာ အာရ်၊ အယ်လ်၊ ဟိုင်မာ-ဂျေအယ်လ်မှ
သခင်ဘုရားနေ့ညနေပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားခြင်း
Lord’s Day Evening, July 10, 2011
“တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးသော တပည့်တော်တို့ကို ခေါ်တော်မူပြီးမှ ညစ်ညူးသောနတ်တို့ကို နိုင်စေခြင်းငှာ အခွင့်အာဏာပေးလျှက် နှစ်ယောက်စီနှစ်ယောက်စီ စေလွတ်တော်မူ၍ (ရှင်မာကု ၆း၇)။ ဤတစ်ဆယ့်နှစ်ယောက်သောလူတို့သည် ယေရှုဘုရားနှင့် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သာ အတူ နေခဲ့ကြသည်။ သို့ပါသော်လည်း ထိုသူတို့ကို နှစ်ယောက်တစ်တွဲစီ တွဲစေပြီး နောင်တတရားနှင့်ဆိုင်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြစေခဲ့သည်။ (ရှင်မာကု ၆း၁၂)။ ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် တောင်ပေါ်သို့တက်၍ အလိုတော်ရှိသော သူတို့ကို ခေါ်တော်မူပြီး “တရားဒေသနာတော်ဟောကြားရန် စေလွှတ်ခဲ့၏ (မာကု ၃း၁၄)။ ဤသူများသည် ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၀ကြသော သူများမဟုတ်ကြသည်ကို သင်တို့အသေအချာ သိနိုင်ပါသည်။ နည်းတူစွာ ယုဒရှာကာယုတ်လည်း အသစ်တဖန် အသက်တာမပြောင်းလဲသလို သောမလည်း ထိုအတူ သတင်းကောင်းကို မယုံကြည်ခဲ့ပါ။ ထိုနည်းတူရှင်ပေတရုလည်း အဖဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ပြည့်စုံစေရန် ကားတိုင်ခရီးသို့ လျှောက်လှမ်းသောယေရှုကို တားဆီးခဲ့၏။ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်က ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်း အတွက် ထိုတပည့်တော်တို့ကို ဦးစွာမစေလွှတ်သေးခင်၊ ပထမအကြိမ်ရှိမုန်နှင့် အန္ဒြေညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ကို ပြောကြားသည်မှာ “ ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြလော့။ သင်တို့သည် လူကိုမျှားသော တံငါဖြစ်စေခြင်းငှာ ပြုမည်ဟု အမိန့်တော်ရှိလေသော် ထိုသူတို့သည် ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုစွန့်၍ နောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏ဟု (ရှင်မဿဲ ၄း၁၉-၂၀) ၌ ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
တစ်နှစ်ကြာပြီးနောက် ထပ်တစ်ကြိမ်ခရစ်တော်ဘုရားသည် တပည့်တော်ခုနှစ်ဆယ်ကို ခေါ်ထုတ်ခဲ့ပြီး “ထိုနောက်မှ ဘုရားသခင်သည် အခြားသော တပည့်တော်ခုနှစ်ကျိပ်တို့ကို ခန့်ထားတော်မူ၍ ကိုယ်တိုင် ရူအးကလေအံ့သော မြို့ရွာအရပ်ရပ် ထိုသို့ရှေ့တော်၌ နှစ်ယောက်စီ၊ နှစ်ယောက်စီစေလွှတ်တော်မူခဲ့သည် (ရှင်လုကာ ၁ဝး၁)။ ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်လုကာ အခန်းကြီ (၇) ကို ဖွင့်ထားကြပါ၊ မတ်တပ်ရပ်လျှက် ကျွန်ုပ် အပိုဒ်ငယ် ၁ မှ ၃ အထိ ဖတ်ကြားပါမည်။
“ထို့နောက်မှ သခင်ဘုရားသည် အခြားသော တပည့်တော်ခုနှစ်ကျိပ်တို့ကို ခန့်ထားတော်မူ၍ ကိုယ်တိုင်ရူအးကလေအံ့သော မြို့ရွာအရပ်ရပ်တို့သို့ ရှေ့တော်၌ နှစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်စီ စေလွှတ်တော် မူ၏။ သူတို့အား မိန့်တော်မူသည်ကား စပါးရိတ်စရာများစွာရှိ၏။ ရိတ်သောသူတို့သည် နည်းကြ၏။ ထို့ကြောင့် လုပ်ဆောင်သော သူတို့ကို စပါးရိတ်စေခြင်းငှာ စပါးရှင်စေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း ဆုတောင်းကြလော့။ သင်တို့သွားလေရာမှာ တောခွေးစုထဲသို့ သိုးသူငယ်တို့ကို စေလွှတ်သကဲ့သို့ သင်တို့ကို ငါစေလွှတ်၏ (ရှင်လုကာ ၁း၁-၃)
နှစ်ယောက်စီ၊ နှစ်ယောက်စီ စေလွှတ်ခြင်းသည် ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းဝေငှဖို့ရန် ခရစ်တော်၏ နည်းလမ်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းလမ်းသည် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ အသေအချာလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ လိုမည်ဟု ထင်ပါသည်။ အလုပ်သစ်ထဲ၌ အတွေ့အကြုံနုနယ်သူ၊ သက်နုခရစ်ယာန်များ ဖြစ်ပေမယ့် ထိုသူတို့ကို သခင်သည် အဝေးသို့ တရားဟောကြားရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ အဝေးသို့တရားဟော စေလွှတ်ဖို့ရန် ထိုတပည့် တော်တို့အား နှစ်ရှည်လများကြာရှည် သင်ကြားခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ လုံး၀မရှိခဲ့ပါ။ သခင်ဘုရားမိန့်တော်မူ သည်ကား
“သင်တို့သွားလေရာများတော့ ခွေးစုထဲသို့၊ သိုးသူငယ်တို့ကို စေလွှတ်သကဲ့သို့ သင်တို့ကို ငါစေလွှတ် ၏ (လုကာ ဝး၃)
အတွေ့အကြုံနုနယ်သော ခရစ်တော်နောက်လိုက်လူငယ်တို့အား မည်သို့ဆုတောင်းရမည်ကို သခင် သင်ကြားပေးသည်ကို မှတ်ထားသင့်ပေသည်။ မည်ကဲ့သို့ ဆုတောင်းရမည်ကို အပိုဒ်ငယ် ၂ ၌ သေချာစွာ ဖော်ပြခဲ့သည်။
“စပါးရိတ်စရာများစွာရှိ၏။ ရိတ်သော သူတို့သည် နည်းကြ၏ ထို့ကြောင့် လုပ်ဆောင်သောသူတို့ကို စပါးရိတ်စေခြင်း စပါးရှင်စေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း ဆုတောင်းကြလော့ (ရှင်လုကာ ၁ဝး၂)၌ သင်ကြားခဲ့သည်။
လုပ်ဆောင်သောသူတို့ကို စပါးရိတ်စေခြင်းငှာ စပါးရှင်စေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း ဆုတောင်းကြလော့ ဟု ဆုတောင်းရမည်ကို အတွေ့အကြုံနုနယ်သော နောက်လိုက်များအား ယေရှုဘုရားပြောကြားခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ်၊ သူစပ်ဆိုသော ဓမ္မသီချင်း၌ အောက်ပါအတိုင်း သီကုံးရေးသွားပါသည်။
ရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစး “ရိတ်သိမ်းခြင်းငှာ စေလွှတ်မူပါ”
ကျွန်ုပ်အားစေလွှတ်တော်မူပါ ရိတ်သိမ်းရန် အသီးအနှံများ
ယနေ့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ် ဖမ်းဆီးဖို့ရန် စေလွှတ်မူပါ
(၁၈၉၅-၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ဂိုက်စ်သီကုံးသော
“ယေရှုသည် အနီးအပါးသို့ ချဉ်းကပ်တော်မူပြီးလျှင် ကောင်းကင်ဘုံ၌လည်းကောင်း၊ မြေကြီးပေါ်၌ လည်းကောင်း၊ စီရင်ပိုင်သော အခွင့်တန်ခိုးရှိသမျှတို့ကို ငါခံရပြီ။ သင့်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျှက်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ နာမတော်နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့။ ငါသည်သင်တို့အား ပေးသမျှသော ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှာ ဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့။ ငါသည်လည်း ကမ္ဘာကာလကုန်သည့်တိုင်အောင် သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ် မပြတ်ရှိသည်ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။ (ရှင်မဿဲ ၂၈း၁၈-၂၀)။
ရှင်မာကုကျမ်း၏ အဆုံး၌ ခရစ်တော်ပြောကြားသည်မှာ
“သင်တို့သည် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှသို့ သွား၍ဝေနေယျသတ္တဝါအပေါင်းတို့အား ဧဝံဂေလိတရား ကို ဟောကြားလော (ရှင်မာကု ၁၆း၁၅)။
“ခရစ်တော်၏ အခွင့်အားဖြင့် နောင်တတရားနှင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းတရားကို ယေရုဆလင်မြို့မှ စသော လူမျိုးတကာတို့အား ဟောကြားရမည် (ရှင်လုကာ ၂၄း၄၇)။
ရှင်ယောဟန်ကျမ်း၏ အဆုံးပိုင်း၌ ခရစ်တော်ပြောကြားသည်မှာ
“ခမည်းတော်သည် ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသည်နည်းတူ သင်တို့ကို ငါစေလွှတ်သည်ဟု မိန့်တော် မူပြီးလျှင် “ (ယောဟန် ၂ဝး၂၁)။
ခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ရူအးကတော်မမူခင် နောက်ဆုံးမိန့်ကြားခဲ့သည်မှာ
“ထိုသို့ မရှိသော်လည်း၊ သင်တို့ပေါ်သို့ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်သောအခါ သင်တို့သည် တန်ခိုးကို ခံရ၍ ယေရုဆလင်မြို့မှစသော ယုဒပြည်၊ ရာမရိပြည်၊ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ငါ၏ သက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏ (တမန် ၁း၈)။
ထိုအမိန့်တော်သည် တမန်တော်များကိုသာ မိန့်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး ယနေ့ခရစ်ယာန်များအတွက် မဟုတ်ပါဟု လူတစ်ဦးက မိမိတို့၏ အသင်းတော်ကို အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာ ကွဲပြားစေခဲ့သည်။ ထိုသူသည် ကယ်ဗင်နီဇမ်း ခြုံထည်ကို လွှမ်းခြုံပြီး လူတို့အား သူ့နောက်လိုက်စေဖို့ အသင်းတော်ကို ဖြိုခွဲလိုသူသာဖြစ်သည်။ ယေရှုဘုရား ၏ မိန့်တော်မူသံကို နာခံခြင်းမရှိ၊ ၎င်းအမိန့်တော်ကို ပြောင်းလဲပစ်သော သူတို့၌ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ သက်ရောက်မည်မဟုတ်။
စပါဂျန်က ကယ်ဗင်၏ အချက် ၅ ချက်ကို ကောက်နုတ်ခဲ့သည်။ သို့ပေမယ့် သူသည် ကယ်ဗင်နောက် လိုက်တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါ။ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ကြားက မတူခြားနားသော အချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင် နိုင်သည်။ စပါဂျန်ပြောကြားသည်မှာ၊
‘ယခုတွင် ကယ်တင်ရှင်သခင်၏ မိန့်တော်မူခဲ့ပြီးသော အသက်ရှင်သော နုတ်ကပတ်တော်သည် ယမန် နေ့အတွက်သာ တန်ခိုးတော်တည်မြဲသည်မဟုတ် ယနေ့အတွက်လည်း တန်ခိုးတော်နှင့် ပြည့်စုံလျှက် ရှိသည်ကို နားလည်စေလိုပါသည်။ ကယ်တင်ရှင်၏ အမိန့်အာဏာသည် တမန်တော်တို့အတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်^မ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတိုင်း၏ ပခုံးပြောင်းတာဝန်ပင် ဖြစ်သည်။ “ သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျှက် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ နာမာန်ဗတ္တိဇံကို ပေးကြလော့” ဟု မိန့်ကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကနဦးသိုးသူငယ်တော်၏ နောက်လ်ိုက်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားမှ ကင်းလွတ်စေသည်မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ ခန့်အပ်ခြင်းတာဝန်အရ ရှေ့သို့ ချီတက်ပြီး အမိန့်တော်များကို ချက်ခြင်း ပြုမူဆောင် ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ (စီအိပ်ချစပါဂျန်)
The metropolitan Tabernacle pulpit, Pilgrim Publication, 1986 reprint volume VII. P.281)
ကျွန်ုပ်တို့ တစ်ယောက်ချင်စီလည်း ဒေါက်တာရိုက်စ်နှင့်အတူ သီဆိုကြပါစို့
“ ကျွန်ုပ်အား အသီးအနှံရိတ်သိမ်းရန် စေလွှတ်မူပါ
ယနေ့ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖမ်းဆီး၍ စေလွှတ်မူပါ”
စားသောက်ပွဲကြီးပုံ ဥပမာ၌ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ “သခင်က မြို့ပြင်လမ်းမခြံနားသို့ သွားအုံးလော့။ ငါ့အိမ်ကို ပြည့်စေခြင်းငှာ အနိုင်အထက် ခေါ်သွင်းလော့။ (ရှင်လုကာ ၁၄း၂၃) ၌ မိန့်တော်မူသည်။ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်ပွဲပုံ ဥပမာ၌ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ “လမ်းမလမ်းကြားသို့သွာ၍ တွေ့သမျှသော သူတို့ကို ပွဲသို့ခေါ်ဖိတ်ကြဟု အမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်း” (ရှင်မဿဲ ၂၂း၉) ၌ မိန့်တော် မူသည်။
ယေရှုဘုရားတည်ဆောက်ခဲ့သော ယေရုဆလင်မြို့ ဒေသန္တရ အသင်းတော်၌ ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းကို အတိအကျပင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ပင်တေကုဧတ္တပွဲနေ့အပြီး ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်တွင် ဗိမာန်တော်မှူး ညဉ်းတွားပြောကြားသည်မှာ “ ယေရှုဆလင်မြို့ကို သင်တို့အယူဝါဒနှင့် ပြည့်စေသည်ဖြစ်၍ “ ဟု (တမန် ၅ဒ၂၈) ၌ ညဉ်းတွာမြည်တမ်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ တမန်တော် ၅း၄၂ တွင် ဗိမာန်တော်၌၎င်း ၊ အိမ်၌၎င်း နေတိုင်းအစဉ်ဆုံးမသွန်သင်လျှက် ဟုဖေါ်ပြခဲ့သည်။တမန်တော် ၆း၁ ထိုကာလ၌ တပည့်တော်တို့ သည် များပြားသည်ရှိသော် ဟုထပ်မံ ၍ဖေါ်ပြခဲ့၏။ အဆုံး၌ တမန်တော် ၁၂း၂၄ ကို ဖတ်ကြည့်ပါသော်၊ “ ဘုရာသခင်၏ သာသနာတော်သည် တိုးပွားများပြားလေ၏” ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒေါက်တာကျွန်ုပ်အာရ်ရိုက်စ် ပြောကြားသည်မှာ၊
“ရှာမရိမြို့၊ သင်းထောက်ဖိလိပ္ပု ခရစ်တော်၏ အကြောင်းတမန်တာ် ၆း၈ ၌ ပြောကြားရာတွင်၊ “လူအစုအဝေးတို့သည် ကြား၍ ဖိလိပ္ပုပြုသော နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို မြင်သောအခါ သူ၏စကားကို တညီတညွတ်တည်း နားထောင်ကြ၏” ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၂ တွင် “ဖိလစ်ပ္ပုသည် ဘုရားသခင် ၏ နိုင်ငံတော်နှင့်လည်းကောင်း၊ ယေရှုခရစ်၏ နာမတော်နှင့်လည်းကောင်း၊ စပ်ဆိုင်သော ဧဝံဂေလိ တရားကို ဟောပြော၍ ထိုသူတို့သည် ယုံကြည်သောအခါ ယောက်ျားမိန်းမတို့သည် ဗတ္တံဇံကိုခံကြ၏” ထိုကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးအရှိန်အဟုန်အားဖြင့် မြောက်များစွာသော လူများအသက်တာ ပြောင်းလဲခြင်းသည် ဓမ္မသစ်ကာလ အသင်းတော်၏ ပုံမှန်အခြေအနေပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် တမန်တော် ၉း၃၁ ၌ ဖော်ပြထားသည်မှာ “ သခင် ဘုရားကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း၌လည်းကောင်း သန့်ရှင်သော ဝိညာဉ်တော်၏ အဆုံးအမ၌လည်ကောင်း၊ မွေ့လျော်သောအားဖြင့် ပွားများကြ၏ ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
အသင်းတော် “တိုးပွားလာခြင်း” သည် အသစ်သော ယုံကြည်သူ များများပြားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏။ ထိုကဲ့သို့ ပုံမှန်တိုးပွားခြင်းသည် ဓမ္မ သစ်အသင်းတော်သူ ^သားများ သဘောတညီတညွတ်တည်းဖြင့် နေ့ရက် စဉ်တိုင်းသူတစ်ပါးအား ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဝေငှ သောကြောင့်ဖြစ် သည်။ (ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ် ရိုက်စ်ဒီဒီ၊ ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော် များ ဝိညာဉ်များ မဖမ်းဆီးနိုင်သနည်း၊ ထာ၀ရဘုရားဓါး ပုံနှိပ်တိုက် ၁၉၆၆၊ စာ ၂၅)။
ဒေါက်တာရိုက်စ်ပြောကြားသည်မှာ၊ မတူမတန်ညှင်းဆဲခြင်း ကြားထဲ ဘုရားမဲ့တရားမဲ့ လူသားများကြား ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းသူတွေအလယ်၌ ဓမ္မသစ်အသင်းတော်သည် အံ့ဩဖွယ်တိုးပွားများပြားခြင်းမှာ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ ထက်သာ၍ ဝိညာဉ်ရေးရာ အသိရူအးကယ်၀သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဝါ့နောခ်၏ ကာသိုလစ်ဂိုဏ်းခွဲထွက် သူတို့၏ သမိုင်း ဟူသော စာအုပ်ထဲ ပြောကြားသည်မှာ ပင်တေရုတ္တေနေ့အလွန် ၆ နှစ်၊ ၇ နှစ်၊ ပထမရာစုတွင် ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူများမှာ ၃ ရာစု လောက်က ကြီးမားသော ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ များစွာသော မာတုရ အသေခံခြင်း ရှိစဉ်တွင် ခရစ်ယုံကြည်သူပေါင်း ၈၀၀၀၀၀၀ ခန့်တိုးပွားများပြားလာခဲ့သည်။ ရောမအင်ပါယာ တွင် ၁၅ ပုံ ၁ ပုံသည် (၁၅ ယောက်လျှင် တစ်ယောက်သည် ရောမစစ်သားတို့၏ သွေးစွန်းညှင်းဆဲနှိပ်စက် သည့်ကြားက စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ သတေဖန်နှင့် ယာကုတို့သည် ယေရုဆလင်မြို့၌ပင် မာတုရအသေခံ ပေးဆပ်သွားခဲ့သည်။ အခြားသော ယုံကြည်သူများသည်လည်း နေရာအနှံ့တွင် သေသည့်အထိ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့ရသည် “ယောက်ျm;မိန်းမတို့ကို ချည်နှောင်၍ ထောင်ထဲမှာ လှောင်ထားလျက် အသေသတ်ခြင်းသို့တိုင်အောင် ထိုတရားလမ်းကို ညှဉ်းဆဲပါပြီ”ဟု (တမန် ၂၂း၄) ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ ရှင်ပေါလုသည်လည်း ထောင်ထဲအကြိမ်ကြိမ်ကျခံရ၏။ အသေသတ်ခြင်းမှ အကြိမ်ကြိမ် လွတ်မြောက်ရ၏။ ထိုကဲ့သို့ ကြိုးစားအမှုထမ်းခြင်းကြောင့် ဂျူးလူမျိုးထောင်ချီ၍ အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲကြရ သည်။ သွေးစွန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို နီရိုးဘုရင်ကိုယ်တိုင် ဦးစီးလျှက် ရှင်ပေါလု အခြားသောတမန်တော်များကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့လေသည်။ ဟတ်ဒရီယမ်၏ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ အန်တိုနီနတ်၏ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ပီးယစ်မာဓါးစ်နှင့် ဆက်တီမာစ် ဆဗီရက်စ်တို့၏ လက်ထက်၌ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့ကြရသည်။ မီးလျှံမီးထဲ အသေသတ်ညှဉ်းစက်ခြင်းအထိ ဧဝံဂေလိအဖို့ အသက်ပေးကြိုးပမ်းခဲ့ကြရပါသည်။ ဝေါခ်မန်းပြောကြားသည်မှာ –
“နှစ်ပေါင်းနှစ်ထေင်ကျော်လာပါပြီ၊ စစ်မှန်သော ခရစ်ယန်ယုံကြည်သူများ သည် ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းကြားမှ စွန့်လွှတ်ခံရခြင်း၊ အထင်အမြင်သေး ခံရသူအဖြစ် ယုံကြည်ခြင်း၌ ပေါင်းစည်းခဲ့ကြ၏။ လောကီလူသားအများတို့၏ မလိုမုန်းတီးမှုကို ခံခဲ့ရကြ၏။ မကြာခဏ ထောင်ထဲချခံရခြင်း သေထိတိုင် ထိုရောမအင်ပါယာလက်အောက်တွင် ခရစ်ယာန်များ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံ ရကြသည်။ နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်တိုင်ခဲ့ပေပြီ။ ယုံကြည်သူ ခရစ်ယန်များသည် အဖိုးအခမြောက်များစွာ ပေးဆပ်ပြီး ခရစ်တော်ဘုရားနောက် လိုက်ခဲ့ကြ သည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးအနစ်နာခံပေးဆပ်ပြီး ခရစ်ယန် ယုံကြည်သူများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ နှစ်နှစ်ထောင်တိုင်ခဲ့ပေပြီ။ ခရစ်ယုံကြည်သူများသည် ရာဇဝတ်သားပမာ ထောင်ထဲချခြင်းခံရ၊ ညှဉ်းပန်းခြင်းတို့ကို ခံရကြသော်လည်း မိမိတို့၏ ယုံကြည်မှုကို မစွန့် ခရစ်တော်နောက် လိုက်ခဲ့ကြရပါသည်။ (Rice ibid, P.P. 27-28)
ဒေါက်တာရိုက်စ်ပြောကြားသည်မှာ နှစ်မြို့စရာမကောင်းသော ခေတ်ကာလ အခြေအနေအလယ်တွင် ခရစ်ယန်ယုံကြည်သူများသည် မလိုမုန်းတီးခံရခြင်း၊ တံခါးပိတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရကြရသည့်ကြားတွင် ပင် အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ဖမ်းဆီးခြင်းအမှုတော်မြတ်၌ ပါဝင်လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြပါသည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်များ၏ ဝိညာဉ်ဖမ်းဆီးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ဓမ္မသစ်ကာလ ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူများတို့၏ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းက မည်သို့ကွာဟသနည်း? (Rငခနယ Iဘငိ.) ဓမ္မသစ်အသင်း တော်များနှင့် ယုံကြည်သူခရစ်ယန်များနှင့် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်များနှင့် ယုံကြည်သူများကို နှိုင်းယှဉ် သည့်အခါတွင် ယနေ့ခရစ်ယန်များသည် ရှက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ရှုံးနိမ့်နေကြရပြီး ကနဦး ခရစ်ယန် များ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို မမှီနိုင်ပေ။ (Rice, ibid. P.29) ဒေါက်တာရိုက်စ်က ဆက်လက်၍ပြောကြားရာ တွင် ဓမ္မသစ်အသင်းတော်၊ ခရစ်ယန်ယုံကြည်သူများ မီးကုန်ယမ်းကုန် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါသော် ... လူသားဟူသည် သေတတ်သောအပြစ် ဇာတိသဘော ရှိကြသည်။ သို့ပါသော်လည်း ဓမ္မသစ်ခရစ်ယန်များသည် အမှုတော်မြတ်၌ ခရစ်တော်အမိန့်တော်ကို နာခံခြင်း၊ စိတ်အားထက်သန်စွာ ပါဝင်ဆက်ကပ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။
ကိုယ်တော့် ကြီးမားမေတ္တာမှ ဘေးချော်လုပြီ ဟူ၍ သီကုံးရေးသားပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ ယနေ့အသင်းတော်များသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ဝိညာဉ်ခွန်အားယူလျှက် စိတ်အားတက်ရူအးကစွာ သနားခြင်းဂရုဏာတော်ကို ရှေ့ရှုလျှက် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ် ဖမ်းဆီးရပါမည်။ ဓမ္မသစ်ကာလက မီးကုန်ယမ်းကုန် အမှုတော်မြတ်၌ လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ အခြားသော ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရန် နည်းစနစ်မရှိတော့ပေ။ (Rice, IbId, P. 149-150)
ဒေါက်တာ ရိုက်စ်၏ အသားပေးရေးသားဖော်ပြသော ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းစဉ်သည် “အလုပ်မဖြစ်” ဟု ပြောကြမည်ကို ကျွန်ုပ်သိထားပါသည်။ အချို့တို့သည် ကယ်လ်ဗင်၏ အယူဝါဒနောက်သို့ လိုက်ကြခဲ့ကြပြီ။ ကယ်လ်ဗင်ဝါဒထဲက အချက်ကြီး (၅) ချက်ကို မဆိုလိုပေ။ ကယ်လ်ဗင်၏ အယူဝါဒကို ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ကယ်လ်ဗင်၏ အတွေးအခေါ်က ပျောက်ဆုံးလူသားသည် လုံး၀ဥဿုံပျက်စီးနေ၍ ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့၍ ထိုသူအဖို့ နောင်တတရားနှင့်ဆိုင်သော တရားပင်မလိုတော့ပေ။ ခရစ်ယန်တို့၏ လုပ်ငန်းဖြစ်သော ဧဝံဂေလိ တရားပင်လည်း မလိုအပ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်က ရွေးနုတ်ကယ်တင်ပါလိမ့်မည်။ ဘာဆိုဘာမှ လုပ်စရာမလိုဟူသော အယူအဆ၊ အတွေးအခေါ်နောက်သို့ လိုက်ပါကြပြီဖြစ်သည်။ ဂျော့ဖ်ဝိုက်ဖီးလ်၊ ဝီလျံကယ်ရီ၊ စပါဂျန်နှင့် အခြားသောဝိညာဉ်ဖခင်များက ကယ်ဗင် အယူဝါဒမှ အချက် (၅) ချက်ကို ထုတ်ယူ ရန်သဘောတူဖော်ပြ၏။ သို့သော်လည်း ထိုသူတို့သည် ကယ်လ်ဗင်အယူနောက်လိုက်သူများ မဟုတ်ကြပါ။ ထိုသူတို့ တစ်ပြိုင်နက် ယုံကြည်သည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် “သာသနာပြုဆရာ ဆောင်ရွက်ရသော အမှုကို ဆောင်ရွက်ကြလော့” ဟု (၂တိ ၄း၅) ၌ ဖော်ပြချက်အတိုင်း သဘောတူကြပါသည်။ ဘာသာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ (reformed) သင်းအုပ်ဆရာများကို (SPurgeon V. Hyper-calvinism, by Rev Iain H. Murray (Banner of Truth trust, 1995) စာအုပ်ကို ဖတ်စေလိုပါသ်ည။ ဤနေရာ၌ နှိပ်ပြီး ဝင်ဖတ်ပါ။ ၎င်းစာအုပ်သည် အံ့ဩဖွယ်သင်ကို ဝိညာဉ်တန်ခိုး၊ ရရှိစေပြီး သင့်နှလုံးသားကို နွေးထွေးစေမည်။ အသစ်သော အသက်တာကို ရရှိစေပြီး ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းဝေငှဖို့ရန် ပို့ပေးလိမ့်မည်။
ဒေါက်တာရိုက်စ်၏ ခရစ်ယန်ယုံကြည်သူများအား ကိုယ်စိတ်နှလုံးပါလျှက် အမှုတော်မြတ် ဆောင်ရွက်ဖို့ တိုက်တွန်းခြင်းသည် သင့်အဖို့ အမှားမရှိစေပါဘူး။ အမှုတော်မြတ်အတွက် အားနည်းရခြင်းသည် ဝိညာဉ် ပျောက်ဆုံးသူတို့၏ အကြောင်းအရာ နှံ့စပ်အောင် လေ့လာခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ မခံယူခင် နောင်တတရားကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိ၊ ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားနှင့်လည်း ထိတွေ့ခံစားမှုမရှိဘဲ ခရစ်ယန်တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ဆုတောင်းပေးပါ။ ဆိုတတ်ကြသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဒေါက်တာခေကန်နှင့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ရေးသားသော “အပေါ်ယံဆန်ခရစ်ယန်” ကို ဖတ်ကြားနိုင်ရန် Today's Apostasy: How Decisionism is Destroying our churches ကို နှိပ်ပြီးဝင်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဒေါက်တာ အာရ်ရိုက်စ် ကျွန်ုပ်အားပေးလိုက်သော ကောက်နုတ်ချက်များကို ကျွန်တော်အရမ်းပဲ သဘောတူကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ ကနဦးခရစ်ယန်များ၏ အမှုတော်မြတ်၌ လုပ်ဆောင်ခြင်းများကို ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ သတိချပ်ဖို့ လိုပါသည်။ သူတို့၏ပုံစံနမူနာများကို လိုက်နာဖို့ လိုပါသည်။ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များအဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြပါစို့၊ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ မခံယူခင် ထိုသူတို့ကို ဖြစ်နိုင်သမျှ စစ်မှန်သော ခရစ်ယန်များ ဖြစ်မဖြစ်ကို လေ့လာသုံးသပ် ဂရုစိုက်ကြပါစို့! ဤအရာအားလုံး၏အပေါ်၌ ခရဏ်တော်ဘုရား၏ မဟာစေခိုင်းချက်ကို အားလုံးသတိရကြပါစို့
“သခင်က မြို့ပြင်၊ လမ်းမ၊ ခြံနားသို့သွားအုံးလော့။ ငါ့အိမ်ကိုပြည့်စေခြင်းငှာ အနိုင်အထက် ခေါ်သွင်းလော့ (လုကာ ၁၄း၂၃)
အားလုံးမတ်တပ်ရပ်လျှက် ဒေါက်တာအိုးစ်ဝေါ့ဒ်ဂျေစမစ်၏ သတင်းကောင်း ဝေငှစို့ သတင်းကောင်းဝေငှစို့၊ သီးကို သီဆိုကြပါစို့။
စစ်မက်ဘေးဒဏ်သင့်သူများ၊ သဘော၀ဘေးသင့် လောကကြီးမှာ
ရှင်းလင်းချစ်ခင်တတ်သော ယုံကြည် ခိုင်မာခြင်း စိတ်ထားပေးမူပါ။
သခင်ဖိတ်ခေါ်သံ သတိမူလျှက် ဝိညာဉ်ငိုက်မျဉ်း အိပ်ပျော်သူများ နိုးထစေပါ။
သခင်မိန့်တော်မူသည်ကား ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဝေငှကြလော့။
ယေရှုနာမယူလျှက် ကမ္ဘာမြေအဆုံး သတင်းကောင်းဝေငှစို့ ကောင်းကင်ဘုံမှ
ခေါ်သံမူကား ဧဝံဂေလိ ကောင်းဝေမျှဟူ၍ ဘုရားသခင်မေတ္တာ
ကျေးဇူးသေလုမျောပါး ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များဆီ အမှောင်ဖုံးလွှမ်း ကမ္ဘာအဆုံးထိ
(ဒေါက်တာ အို့စ်တော်၌ ဂျေစမစ်ç ၁၈၈၉-၁၉၈၆၊ ဧဝံဂေလိဝေငှကြစို့၊ ဧဝံဂေလိ
ဝေငှကြစို့၊ ကိုချားစ်ဝေစလေ ၁၇၀၇-၁၇၈၈ ဓဗညိ ခသည ငအ ဘန သံစဉ်ဖြင့်
ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာ ခရိတ်တန်အာရ်ချန်မှ ရှင်လုကာ ၉း ၁-၆ ကို ဖတ်ကြားပေးသည်။
တရားဒေသနာမတိုင်ခင် မစ္စတာ ဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ ၁၈၉၅-၁၅၈၀ ခုနှစ်
ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် သီကုံးသော ကျွန်ုပ်ရှိသည် စေလွှတ်မူပါ၊ ဓမ္မသီချင်းကို ကျူးဧပေးပါသည်။